Front Page Archives - Harley Street Clinic London Yakavanzika Kuedza Zvipatara Zvokurapa
Yakagadziridzwa kuvandudzwa pa January 15, 2021 Na Harley Street Clinic
Mushonga wekuzvimiririra weOxford wakabvumidzwa neveUK regulators uye zvinotarisirwa kuti majekiseni epachivande eizvi achawanikwa nyore nyore munguva pfupi iri kutevera..
Iri sei Pfizer Coronavirus Covid 19 Katemera wakapihwa?
Sejekiseni ruoko rwokumusoro.
Ndiani anogona kuva neCoronavirus Covid 19 vacccin?
Katemera weCovid-19 anowanikwa kuvanhu vese.
Ini ndinowana sei nzira yekudzivirira yeCoronavirus?
Please download and use the contact form to register your interest in the Pfizer Vaccine. Once the vaccine is released, chiremba wako weHarley Street achatora mukana wekukubaya jekiseni paunopinda pakuvhiyiwa nekuda kwezvikonzero zvakajairika, kana yako yekudzivirira wefuruwenza wegore.
Iwe unogona kuve nayo panguva imwechete seyako furu jab kana uchida.
Kana iwe uchinetseka kuti iwe ungapotsa pakurapwa kweCoronavirus, bata wako Harley Street Clinic kuronga musangano kuti uve nekudzivirira.
Pachave paine mhedzisiro kubva kuCoronavirus vaccin Private?
Zvakajairika kuwana redness uye kusagadzikana panzvimbo yekurapa, pamwe nemusoro, asi mhedzisiro iyi haifanirwe kugara kupfuura mazuva mashoma. Ona wako GP kana uine migumisiro inogara kwenguva refu kupfuura mazuva mashoma, kana kana iwe ukagadzira kukurumidza mushure mekuve nePfizer Coronavirus Vaccine Yakavanzika.
Ndingawana here Covid19 yekudzivirira pachivande?
Iyo Pfizer Covid019 Coronavirus jab inowanikwa zvakavanzika, asi inodhura uye iri mupfupi. Kutarisira kubhadhara pakati pegumi nemazana mashanu emadhora.
Tinogona kuraira kana zvakachengeteka kuti iwe uve nazvo, asi uchafanirwa kushanyira kiriniki yedu yega kuti uzvironge.
Ndokumbirawo ubaye pane iyi link iripazasi kuti upedze fomu kuratidza kufarira kwako.
Yakavanzika Covid19 Fomu Yekudzivirira